Ngokusisiseko, iimpazamo ze-gensets zinokucwangciswa njengeendidi ezininzi, enye yazo ibizwa ngokuba kukungenisa umoya. Indlela yokunciphisa ubushushu bomoya obuthathiweyo be-generator yedizili esetiweyo Ubushushu bekhoyili yangaphakathi yeeseti zejenereyitha zedizili esebenza ziphezulu kakhulu, ukuba iyunithi iphezulu kakhulu kubushushu bomoya, ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni uMvelisi weDiesel? Ngokusebenzisa injini yedizili kunye nombane, umbane osetyenziselwa ukuvelisa amandla ombane. Kwimeko apho ukunqongophala kombane okanye kwiindawo apho kungekho kunxibelelana nombane wamandla, umvelisi wedizili unokusetyenziswa njengombane wombane ongxamisekileyo. ...Funda ngokugqithisileyo »
I-DEUTZ yazisa ngeWaranti yeXesha lokuPhila
Ixesha Post: 01-26-2021
I-Cologne, nge-20 kaJanuwari ka-2021-Umgangatho, uqinisekisiwe: IsiQinisekiso seXesha elitsha leXesha lokuPhila le-DEUTZ simele isibonelelo esinomtsalane kubathengi baso. Ukususela ngoJanuwari 1, 2021, le waranti yandisiweyo iyafumaneka nakweyiphi na indawo esecaleni ye-DEUTZ ethengwe yaza yafakwa ligosa elisemthethweni ...Funda ngokugqithisileyo »
Amandla ka-Weichai, oKhokela iJenereyitha yamaTshayina kwinqanaba eliphezulu
Ixesha Post: 11-27-2020
Kutshanje, bekukho iindaba ezikumgangatho wehlabathi kwicandelo lenjini yaseTshayina. Amandla e-Weichai adale i-generator yokuqala ye-diesel ngokusebenza kwe-thermal ngaphezu kwe-50% kunye nokuqonda ukusetyenziswa kwezorhwebo kwihlabathi. Ayisiyiyo kuphela impumelelo ye-thermal yomzimba wenjini engaphezulu kwe-50%, kodwa ikwanokulula mee ...Funda ngokugqithisileyo »
Umvelisi wedizili omtsha, onke amalungu ngamalungu amatsha, kwaye umphezulu wokudanisa awukho kwimeko efanelekileyo. Ke ngoko, ukusebenza ngokusebenza (okwaziwa njengokusebenza ngokusebenza) kufuneka kwenziwe. Ukubaleka kokusebenza kukwenza ukuba umvelisi wedizili usebenze ixesha elithile phantsi ...Funda ngokugqithisileyo »